ထုတ်ပြန်ကြေငြာချက်များ | Magway Region Government
နိုင်ငံတော်မှငွေကြေးထောက်ပံ့မှုများအား ပုံမှန်ဝင်ငွေမရှိသော အခြေခံလူတန်းစားများ လက်ဝယ်သို့ မှန်ကန်စွာရောက်ရှိစေရေး
နိုင်ငံတော်မှ ပုံမှန်ဝင်ငွေမရှိသော အခြေခံလူတန်းစားများသို့ ငွေကြေးထောက်ပံ့ရာတွင် အမှန်တကယ် ရသင့်ရထိုက်သည့် အိမ်ထောင်စုများအနေဖြင့် သတ်မှတ်ထောက်ပံ့ငွေအတိုင်း မရရှိပါ…
Download File : 20201117_114154.pdf
မကွေးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်း ကျေးလက်ဒေသအသေးစားစက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းများနှင့် လယ်ယာ ကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရေး၊ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများရရှိပြီး လူမှုအဆင့်အတန်းနှ…
တင်ဒါလျှောက်လွှာ၊ တင်ဒါစည်းကမ်းချက်များနှင့် ဈေးနှုန်းအဆိုပြုလွှာ ပြင်ဆင်သတ်မှတ်မှု
(၂၁.၁၀.၂၀၂၀)ရက်နေ့တွင် မကွေးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ Website ၌ ဖော်ပြခဲ့သည့် နေပြည်တော်၊ ဒက္ခိဏသီရိမြို့နယ်၊ ဒက္ခိဏသီရိရပ်ကွက်၊ မြေကွက်အမှတ်(ဒ-၁၁၂)၊ ဧရိယာ(၁.၀၀) ဧကတွင် မကွေးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွ…
Download File : Nay Pyi Taw Guest House Tender Repair PDF.pdf
မကွေးမြို့နယ်စည်ပင်မှ ရေခွန်ပေးဆောင်ခြင်းအားဒဏ်ကြေးကင်းလွတ်ခွင့်ပြု၍ ဆိုင်းငံ့ထားနိုင်ကြောင်း အသိပေးအကြောင်းကြား
Covid-19 ရောဂါကြိုတင်ကာကွယ်ရေးအတွက် မကွေးမြို့နယ်စည်ပင်သာယာရေးအဖွဲ့မှ သိင်္ဂါဂီရိရပ်ကွက်အတွင်း မကွေးမြို့နယ်ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနမှ အသွားအလာကန့်သတ်နယ်မြေအဖြစ်သတ်မှတ်သော နေအိမ်များနှင့် ၎င်းနေအိမ်များတည်ရှိရာလမ်း/ရပ်ကွက်အတွင်းမှ ပြည်သူများအနေဖြင့်…
နိုင်ငံနှင့်အဝန်း Coronavirus Disease 2019(COVID-19)ကမ္ဘာ့ကပ်ရောဂါအား ကာကွယ် ထိန်းချုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းမျ…
ဆည်မြောင်းနှင့်ရေအသုံးချမှုစီမံခန့်ခွဲရေးဦးစီးဌာန၊ တည်ဆောက်ရေး(၈)၊ လက်ထောက်ညွှန်ကြား ရေးမှူး(၃)ရုံးမှ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ခုဘဏ္ဍာရေးနှစ်၊ ငွေလုံးငွေရင်းအသုံးစရိတ်၊ ပြည်ထောင်စုရန်ပုံငွေဖြင့် ဆောင်ရွက်မည့် ဂန့်ဂေါခရိုင်၊…
မကွေးတိုင်းဒေသကြီးဆည်မြောင်းနှင့်ရေအသုံးချမှုစီမံခန့်ခွဲရေးဦးစီးဌာနမှ လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူးရုံးများအလိုက် ၂၀၂၀−၂၀၂၁ခု ဘဏ္ဍာရေးနှစ်၊ ပြည်ထောင်စုနှင့် တိုင်းဒေသကြီးရန်ပုံငွေဖြင့် ဆောင်ရွက်မည့်လုပ်ငန်းများအတွက် ခရိုင်အလိုက် ကျပ်(၁၀)သန်းမှ ကျပ်သန်…
Download File : IWUMD (Tender) Work(1)(1).pdf , IWUMD (Tender) Material(1).pdf
မကွေးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်၊ ခွင့်ပြုရန်ပုံငွေ ကျပ်သန်း (၇၇၀.၀၀၀)ဖြင့် နေပြည်တော်၊…
Download File : Nay Pyi Taw Guest House Tender Application Form - Copy.pdf , Nay Pyi Taw Guest House Structural Design.pdf , Nay Pyi Taw Guest House Electrical System.pdf , Nay Pyi Taw One Storey STAFF QUARTER (TENDER).pdf , NPT Staff Quarter.pdf , NPT-GH-DRAWING LIST-000.pdf , NPT-GH-PLUMBING-002.pdf , NPT-GH-PLUMBING-001.pdf , NPT-GH-PLUMBING-003.pdf , NPT-GH-PLUMBING-004.pdf , NPT-GH-PLUMBING-005.pdf , NPT-GH-SANITARY-001.pdf , NPT-GH-SANITARY-002.pdf , NPT-GH-SANITARY-003.pdf , NPT-GH-SANITARY-004.pdf , NPT-GH-SANITARY-005.pdf , NPT-GH-SANITARY-006.pdf , Nay Pyi Taw GUEST HOUSE (TENDER DRAWINGS Part1).pdf , Nay Pyi Taw GUEST HOUSE (TENDER DRAWINGS Part2).pdf
မကွေးမြို့နယ်စည်ပင်မှ ၂၀၂၀-၂၁ခု၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွင်း လုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူ
မကွေးမြို့နယ်စည်ပင်သာယာရေးအဖွဲ့၏ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ခု၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွင်း မကွေးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့်အဖွဲ့ရန်ပုံငွေများဖြင့်ဆောင်ရွက်မည့် ငွေလုံးငွေရင်းလုပ်ငန်းများအတွက် လိုအပ်သောလုပ်ငန်းခွင်သုံးပစ္စည်းများအား သတ်မှတ်လုပ်ငန်းခွင်…
အောင်လံမြို့နယ်စည်ပင်မှ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာနှစ်အတွက် လုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူ
မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ သရက်ခရိုင်၊ အောင်လံမြို့နယ်စည်ပင်သာယာရေးအဖွဲ့မှ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာနှစ်အတွင်း ဆောင်ရွက်မည့် တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းများအတွက် လိုအပ်သော လုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများဖြစ်သည့် အုတ်၊ သဲ၊ မြေနီနှင့် ကျောက်စရစ်များကို တင်သွင်းရန်အတွက် အိတ်ဖွင့်တင…
မကွေးတိုင်းဒေသကြီး လမ်းဦးစီးဌာနမှ တင်ဒါ (၉)ခု ခေါ်ယူခြင်း
၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက် မကွေးတိုင်းဒေသကြီး လမ်းဦးစီးဌာန၊ တိုင်းဒေသကြီးညွှန်ကြားရေးမှူးရုံး၊ လမ်းအထူးအဖွဲ့ (၁၁) နှင့် ခရိုင်(၅)ခရိုင်တို့မှ ဆောင်ရွက်မည့် အောက်ပါလုပ်ငန်းများအတွက် တင်ဒါ (၉) ခု ခေါ်ယူလျက်ရှိပါသည်−
(၁) မကွေးတိုင်းဒေသကြီး လမ်…
Download File : 2020-21 Tender(all)-1.pdf
မကွေးတိုင်းဒေသကြီး ကျေးလက်ဒေသ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနမှ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန၊ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး ကျေးလက်ဒေသ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန ငွေလုံးငွေရင်းရန်ပုံငွေဖြင့် ဆောင်ရွက်မည့် ကျပ် (၁၀)သန်းနှင့် သန်း(၁၀၀)ကြား လုပ်ငန်းများအတွက် Lot စုစုပေါင်း (၄၀)ခု၊ ၊ ကျပ် သန်း(၁၀၀)အထက…
Download File : 1. Between 10 & 100 (Water).pdf , 2. Between 10 & 100 (Road).pdf , 3. Between 10 & 100 (Building).pdf , 4. Between 10&100 (Regional Gov).pdf , 5. Greater than 100(Water).pdf , 6. Greater than 100 (Road).pdf , 7. Greater than 100 (Building).pdf
မကွေးမြို့နယ်စည်ပင်မှ အခွင့်အရေးလိုင်စင်များ ဈေးပြိုင်ရောင်းချမည်ဖြစ်ကြောင်းကြေညာချက်ထုတ်ပြန်
မကွေးမြို့နယ်စည်ပင်သာယာရေးအဖွဲ့၏၂၀၂၀-၂၀၂၀၁ ခုဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက် အရပ်ရပ်အခွင့်အရေးလိုင်စင်များအား (၂၉.၇.၂၀၂၀)ရက်နေ့တွင် မကွေးမြို့တော်ခန်းမ၌ ဒုတိယအကြိမ် ဈေးပြိုင်စနစ်ဖြင့်လေလံရောင်းချသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးကြေညာချက်ထုတ်ပြန်အပ်ပါသည်။…
၁။ မကွေးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့မှ ကြေငြာစာအမှတ်၊ (၁/၂၀၂၀)ဖြင့် လျှောက်လွှာခေါ်ယူခဲ့သော မကွေးတိုင်းဒေသကြီးကုသရေးဦးစီးဌာနအောက်ရှိ ဆေးရုံကြီး၊ ဆေးရုံ၊ တိုက်နယ်ဆေးရုံများတွင် လစ်လပ် လျက်ရှိသည့် လက်ထောက်ဆရာဝန်ရာထူး(၁၀၃)နေရာအတွက် လျှောက်ထားသူများကို ပ…
မကွေးမြို့နယ်စည်ပင်သာယာရေးအဖွဲ့၏ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခုဘဏ္ဍာရေးနှစ် စည်ပင်သာယာရေးဖြည့်စွက်ခွင့်ပြုရန်ပုံငွေဖြင့် ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများအတွက် (၁၇.၇.၂၀၂၀) ရက်နေ့တွင် မကွေးမြို့နယ်စည်ပင်သာယာရေးအဖွဲ့မှ အိတ်ဖွင့် တင်ဒါခေါ်ယူဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။
တုိင္းေဒသႀကီးအစုိးရအဖြဲ႕၊ ရုံးႀကီးလမ္း၊ ဆားေရႊကင္းရပ္ကြက္၊ မေကြးၿမိဳ႕။